5G yekubatanidza inotyora marekodhi nekuda kweiyo iPhone 13 | Nhau dze iPhone
5G yekubatanidza inotyora marekodhi nekuda kweiyo iPhone 13
Chokwadi uri kufunga kuti iyo iPhone yaive imwe yekupedzisira kushandisa 5G tekinoroji mumidziyo yayo uye ichokwadi. Iyo Apple muoni yakatora nguva yakareba kupfuura makwikwi ekutanga iyi yekuwedzera kune 5G yekubatanidza, asi sezvakataurwa naBloomberg, nhamba yemidziyo yakatengeswa nayo mukati memwedzi waNdira yaive 51% yehuwandu, kuve iyo iPhone 13 chimwe chezvakakosha zvikamu zvekuwana iyi nhamba.
Kuwedzera kwe5G kunoenderera mberi mune zvivakwa uye zvishandiso
Zvingave sei neimwe nzira, 5G yekubatanidza yaive yakakosha kune mamwe makambani uye yakapararira kune ese maturusi, kupfuura iyo yakanyanya kumhanyisa yekumhanyisa inodiwa kusimudzira kutyaira kwakazvimiririra kana fekitori otomatiki. Ndicho chikonzero nei kuwedzera kwayo pasi rose kuri madikanwa. Isu, senguva dzose, vashandisi havazooni mutsauko mukuru pakati pe4G ne5G tekinoroji kana zvasvika pakubhurawuza uye nevamwe, asi makambani anoita.
MuChina tinowana imwe yenyika dzine simba zvikuru maererano nekuwedzera uye kuwanikwa kwezvivakoti uye zvishandiso zvinoenderana ne5G. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muChina vakati nyika ichasimudzira 5G nekuwedzera 600.000 nhepfenyuro itsva gore rino, zvichiunza huwandu hwese kune akati wandei ma antenna anotopfuura mamirioni maviri munyika. Izvi zvinonyanya kukosha pakuwedzera kwayo, senge michina ine iyi 2G yekubatanidza. Iyo iPhone 5 munguva pfupi yapfuura, iyo iPhone SE uye mamwe ese ezvino Apple zvishandiso anga ari vatori vechikamu mune izvi. rekodhi nhamba yemidziyo ine 5G yekubatanidza sarudzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » 5G yekubatanidza inotyora marekodhi nekuda kweiyo iPhone 13
TOP 10 Apple Watch inoshanda yehupenyu hwezuva nezuva
iPadOS 16 ichaunza inoyangarara windows mumaapps kana ekunze kiyibhodhi akabatana